Terrazzo Series Factory, Supplier - China Terrazzo Series Mpanamboatra
Anti Slip feno vatana matevina vita amin'ny rindran-tsivalana miloko 60x60cm
Famaritana momba ny vokatra Mahazo volo tsy miloko fotsim-bolo miloko gorodona vita amin'ny rindran-tsivalana vita amin'ny vatan'ny vatan-dehilahy 60x60cm Cerarock. A: Eny azontsika atao, omena maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fanangonana entana ny sampana. 2. Amin'ny fotoana fandefasana? A: Amin'ny ankapobeny 2-4weeks raha mila vokatra; 1-2 herinandro raha an-tsompitra. 3. Ahoana ny faniriantsika ny volavolantsika? A: Azo ekena ny endrika voamboarina. Azontsika atao ny manao santionany fitsapana ho an'ny lahateninao. 4. Ahoana ny momba ny filaharana kely na mampifangaro endrika amin'ny boaty iray? A: Baiko kely ...
Modern brustic Terrazzo Jereo tsipika serafotsy vita amin'ny 600x600mm Flat Surface
Famaritana famaritana Premium kalitao famolavolana maoderina vita amin'ny mariazy tsy kirakira Teraky Terrazzo Jereo Seram-baravarankely 600x600mm 1. Ny tsiran-tsolika dia manana fanoherana tsara amin'ny hadisoana sy ny fananana tsy alikaola ary ampiasaina betsaka amin'ny toeram-piantsonan'ny besinimaro, zaridainam-panjakana ary tranomboky. 2. Ny fahaiza-manaon'ny anti-fouling dia tsara ihany koa, indrindra amin'ny toerana misy menaka mavesatra, mora ny manadio amin'ny fantsom-bozaka. 3. Ny fomba ihany koa dia tsy manam-paharoa ary fanangonana ny natiora, ny fomban-drazana ary ny kilasy, ny famoronana loko sy modely misy visu ...
Full Boday Porcelain Tile Industrial Style Floor Tile grade AAA 600x600mm
Famaritana momba ny vokatra Maty sy ny mason-javamaniry arahin'i Boday Porcelain Tile Industrial Style Floor Tile grade AAA 600x600mm Nahoana ny anay: mihoatra ny 10 taona ny fanondranana fanandramana tile. Ny kalitao tsara sy ny vidiny mendrika, ny OEM sy ny ODM dia misy. Azo zahana amin'ny loko hafa. Ny serivisy: Ho voavaly ny fanontanianao momba ny vokatra sy ny vidiny ao anatin'ny 24 ora. Fotoana fiasana: 24 ora eo am-pitaovana. Manana QC izahay mandritra ny famokarana sy alohan'ny handefasana entana. Tolotra tsara aolo varotra atolotra, ...
Tontolon'ny efitra fandroana vita amin'ny gorodona Matte Vavaky ny mainty / Beige / Grey loko
Famaritana momba ny vokatra Ny famolavolana Matte farany famenoana ny vatan-tsoroka vita amin'ny vatany, ny gorodona vita amin'ny boribory 600 * 600mm Item: Fitaovana tafo ara-batana feno: Tiorina vita amin'ny boninkazo: Matt, habeny matevina: 600 * 600mm Ny famonosana rano: 0.5-3% Tile Tapaka: Tile Rustic feno vatana Matevina: 9.5mm-10.0mm Ny tombony dia henjana ary sarotra; dia azo avy amin'ny mason-javon-tany, feldspars, kaolins sy fasika izay novadika ho fangaro (tsipika), notsindronina tsara ary avy eo nanindry. Afototra amin'ny mari-pana mahatratra 1220 C ° ity takelaka ity ...
Vazo vita amin'ny mofomamy amin'ny Matt Surface ny fampiasana Tile Ceramic Glazed ao amin'ny Flooring 600x600mm
Famaritana momba ny vokatra simenitra Simenitra Maty tsipika Matetika vita amin'ny Matt Rustic Glazed Porcelain Tile miaraka amin'ny loko isan-karazany Ny fampitahana sy ny famakafakaana dia natao momba ny toetrany sy ny toe-javatra ampiasaina amin'ny fampisehoana mahasarika matetika dia any amin'ny toerana be olona toy ny super market, orinasa lehibe, hopitaly ary subway sns on. Azo tanterahina ny fanaovanao manokana amin'ny fomba tianao. Ny malaza amin'ny tsilo rustic dia manambara tantara manankarena sy kolontsaina lalim-paka, ny vokatra Cerarock dia mampiseho anao fa ny mpanankarena isan-karazany ...